Mahajanga: mankalaza ny Iray volan’ny teny malagasy | Région Boeny
Anisany mankalaza ny Iray volan’ny teny Malagasy ny eto Boeny ka notanterahina ny Alarobia 14 jiona 2017 tao amin’ny Lycée Philibert Tsiranana Mahajanga ny fanokafana izany.
Miara-miasa manatanterka izao fankalazana izao ireo mpampianatra teny malagasy ao amin’ny Lycée Philibert Tsiranana sy ny Foibem-paritry ny kolontsaina ary ny Faritra Boeny. Lohahevitra nosafidiana dia ny hoe “fampifangaroana ny teny malagasy amin’ny teny hafa”.
Novoaboasana nandritra ny lanonana fanokafana ny momba an’io lohahevitra io ary narahina fifanakalozan-kevitra ny mikasika ny hoe « inona ny antony mahatonga ny olom-pirenena eto Mahajanga mampifangaro ny teny Malagasy?». Ny tanjon’ireo mpikarakara dia ny mba hahay hanavaka ny teny malagasy resahina sy ny soratana ny olom-pirenena eto Mahajanga.
Ny akademia malagasy no afaka mamolavola sy mamoaka ny voambolana teny Malagasy eken’ny fanjakana, ary azon’ny tsirairay ampiasaina eo amin’ny sehatry ny fampianarana sy eo amin’ny sehatry ny raharaham-panjakana.
Miainga eo anivon’ny tokantrano tsirairay ny fomba fiteny Malagasy sy fitiavana izany teny izany ary miankina amin’ny fahavononan’ny mpitondra fanjakana ihany koa ny fampanajana azy hoy ny Lehiben’ny Faritra Boeny, izay tonga nanome voninahitra ny lanonana.
Miavaka ny fankalazana ny Iray volan’ny teny Malagasy tamin’ity taona ity eto Mahajanga noho ny fandraisana anjara fanentanana ataon’ireo mpanao gazety eto an-toerana.